रोमाञ्चक जितका साथ पथरी बन्यो च्याम्पियन – Khel Dainik
रोमाञ्चक जितका साथ पथरी बन्यो च्याम्पियन
पथरी (खेलदैनिक) । मोरङको डाँगिहाटमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय खुल्ला नकआउट फुटवल प्रतियोगिताको उपाधी पथरी स्पोटिङ क्लवले जित्न सफल भएको छ । शनिवार सम्पन्न फाइनल भिडन्तमा डाँडाबजार फुटवल क्लव, धनकुटालाई २–१ गोल अन्तरले हराउदै पथरी स्पोटिङ क्लव च्याम्पियन बनेको हो ।
फाइनल खेलको पहिलो हाफतर्फ ८औँ मिनेटमा पथरीका विसाल पाण्डेले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । यद्यपि खेलको २४औ. मिनेटमा धनकुटाका संजय रम्तेलले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पु्र्याए ।
उता दोस्रो हाफमा वैकल्पिक खेलाडीका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका सन्दिप धिमाल पथरीका लागि निर्णायक बने । सन्दिपले खेलको अन्तिमतिर निर्णायक गोल गर्दै पथरीलाई उपाधि जिताउन सफल भएका थिए ।
फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच पथरीका लागि निर्णायक गोलकर्ता सन्दिप धिमाल नै घोषित भए । त्यसवापत उनले ट्रफी र २५ सय हात पारे । विजेता बनेको पथरीले उपाधिसहित १ लाख १ हजार हात पार्यो भने उपविजेता डाँडाबजारले ५१ हजारमा चित्त बुझायो ।
त्यस्तै प्रतियोगिताको व्यक्तिगत विधातर्फ पथरीका मनोज गुरुङ उत्कृष्ट गोलरक्षक, निमोन लिम्बु उत्कृष््ट ्डिफेन्डर, संजय लिम्बु उत्कृष्ट डिमफिल्डर र सुमन बिक उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । त्यस्तै डाँडाबजारका बिबेश गुरुङले उत्कृष्ट फरवार्ड र संजय रम्तेलले सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार जिते ।
व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट हुने सबैले जनही ५–५ हजार प्राप्त गरे । प्रतियोगिता कै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी डाँडाबजारका एलोन राई घोषित हुँदै १० हजार हात पारे । उदीयमान खेलाडी भने आयोजक टोलीका सुरेन्द्र खवास घोषित भए । उनले त्यसवापत ५ हजार प्राप्त गरे ।
विजयी खेलाडीहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी वुद्ध एयरका प्रतिनीधी शालिग्राम बस्नेत र विशिस्ट अतिथी मोरङ एन्फाका अध्यक्ष दिपेन्द्र धिमालले पुरस्कार वितरण गरे । वुद्ध एयरको मुख्य प्रायोजनमा भएको उक्त प्रतियोगितामा प्रदेश भरीका आठ टिम सहभागी थिए ।
← धम्बोझी क्लब राष्ट्रिय लिगका लागि छनौट करन निर्णायक बन्दा तिलकाना सेमिफाइनलमा →
पाराल्याम्पिकका लागि केल्मीको प्रायोजन चैत्र १४, २०७७
ट्राई सिरिजका लागि १९ खेलाडी (नामावली सहित) चैत्र १४, २०७७
फुटबल खेलाडी र अफिसियललाई खेलस्थल मै कोभिड विरुद्धको खोप ! चैत्र १४, २०७७
नेपाली क्रिकेटलाई अझै उचाईंमा पुर्याउने सपनासहित पारसको सन्यास चैत्र १४, २०७७
अल्मुतारीले माफी माग्दै भने “नेपाली फुटबललाई मेरो विशेष सम्मान” चैत्र १४, २०७७
एन्फा प्रवक्ता राईले दिए राजिनामा चैत्र १४, २०७७